काठमाडौं– देशभरि कोरोना भाइरसको संक्रमण ३ हजार ९३ जनालाई देखिएको छ । देशभरका प्रयोगशालामा १३ हजार ८६१ जनाको पिसिआर परीक्षणका क्रममा ३ हजार ९३ जनामा संक्रमण छ । तीमध्ये १ हजार १७४ महिला र १ हजार ९१९ पुरुष छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आज देखिएका संक्रमितसंँगै देशभरि कुल संक्रमित १ लाख ३९ हजार १२९ र सक्रिय संक्रमित ४१ हजार ७७५ जना रहेको जानकारी दिए ।
यस्तै, देशभरका संस्थागत आइसोलेसनमा १३ हजार ५५९, होम आइसोलेसनमा २८ हजार १८६ र क्वारेन्टिनमा ४ हजार २२० जना छन् । आजसम्म १३ लाख १४ जनाको ७७९ पिसिआर परीक्षण गरिएको छ ।
उपत्यकामा १ हजार ७ सय संक्रमित
काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ७०२ जनामा संक्रमण देखिएको छ । काठमाडौंमा १ हजार ४३१, भक्तपुरमा १४८ र ललितपुरमा १२३ जनामा संक्रमण देखिएको छ । डा. गौतमका अनुसार आज २ हजार १०८ जना देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । हालसम्म ९६ हजार ६०९ जना डिस्चार्ज भएका छन् । डिस्चार्ज हुने दर ६९ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।
उनले अहिलेसम्म ७८ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको जानकारी दिए । सोअनुसार प्रदेश नंं १ मा १६, प्रदेश नंं २ मा एक, बाग्मती प्रदेशमा ४९, गण्डकीमा चार, लुम्बिनीमा पाँच र सुदूररपश्चिम प्रदेशमा तीन जना छन् । देशभर २७३ जनालाई सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार भइरहेको छ । सोअनुसार प्रदेश नं १ मा ३०, प्रदेश नंं २ मा १०, बाग्मतीमा १५०, गण्डकीमा २०, लुम्बिनीमा ४८, कर्णालीमा सात र सूदूरपश्चिम प्रदेशमा आठ जना छन् ।
पाँच सयभन्दा बढी संक्रमित रहेका जिल्लामा झापा, मोरङ, सुनसरी, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, कास्की, रुपन्देही, दाङ, बाँके, कैलाली र सुर्खेत छन् । यस्तै संक्रमित शून्य रहेका जिल्लामा मुस्ताङ छ । यसैगरी आज आठ जनाको संक्रमणको कारणले निधन भएको डा. गौतमले जानकारी दिए । अहिलेसम्म ७६५ जनाको संक्रमणको कारणले निधन भएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७ १९:४२
इमेल ठेगाना [email protected]com [email protected] [email protected]